Khamriga | January 2020
Ugu Weyn Ee Khamriga
Sida loo sameeyo champagne guriga ka soo caleemo sabiib ah
Marka la eego fikradda ah shamaca, dad badan ayaa kobciya niyadda. Waxaa loo tixgeliyaa cabitaanka khamriga, laakiin ragga ayaa sidoo kale cabi kara. Waxaan u cambaareyneynaa xaqiiqda ah in cabitaankan kaliya laga heli karo dukaamada waxaana laga dheehan karaa kaliya casiirka canab ah ama wax khamri ah. Waxaa soo baxday in aad ka dhigan kartaa shamac ah guriga marka laga reebo maaddooyinka aadka u fudud, oo ugu weyn ee caleemaha canabka ah.
Khamriga guriga, laga bilaabo wax kasta oo la sameeyo, waa in la hagaajiyaa. Nidaamkani wuxuu caawin doonaa inuu dhadhamiyo dhadhankiisa oo sii wado cabbitaanka muddo dheer. Nidaamka laftiisu waa mid sahlan: waxaad u baahan doontaa gaas, khamri ama tincture iyo sonkor. Waxa la sameeyo iyo waxa tiknoolajiyada xoojinaya - waxaynu sii ogaan doonnaa dheeraad ah. Maxay tahay baahida loo qabo in la xaliyo khamri?
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khamriga 2020